Digir - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan digirta. Maqaalo kale fiiri digir guud, faasuliyad, digirta madow, digirta cas, digirta cad
Digir Phaseolus vulgaris
Digir (; ) Saynis ahaan ka mid ah dhirta lagu magacaabo "Phaseolus vulgaris" waa midho Digirta guud taasi oo leh midab casaan iyo cowlaan isku dhex jira. Digirtu waxay ka mid tahay dhirta qaniga ku ah nafaqada borotiinka ee firileyda ah, taasi oo ka baxda meelo badan oo dunid ah. Gabi ahaan dhirta geedaha digirtu waa mid dhasha hal mar sanadkii, taasi oo u baahan cimilo iyo biyo kala gedisan. Digirtu waa midho yaryar oo adag, qalalan, leh midabo kala duwan taasi oo ku salaysan cimilada, deegaanka iyo nafaqada geedka. Sidoo kale waxaa saameyn ku leh kala duwanaanta midhaha digirta waa jiiniska (genes),
Waxaa jira noocyo badan oo digir ah kuwaasi waxaa ka mid ah: digirta caadiga ah, faasuliyada, digirta madow, digirta cas, digirta cad iyo noocyo kale oo badan. In kastoo meelo badan ay ka baxdo digirtu, hadana labada Ameeriko ayaa lagu sheegaa ineey asal ahaan ka soo jeedo.
3 Soo Saarida
Digirta laga beero deegano ka mid ah koonfurbari Aasiya
Wadanka ugu horeeya soo saarida digirta guud waa wadanka Burma, waxaa ku xiga Hindiya iyo Baraasiil. Dhinaca kale wadano badan oo Afrikaan ah ayaa beerta oo soo saara, waxaana ugu soo saarid badan wadanka Tansaaniya.
Tobanka Wadan Ugu Soo Saarida Badan—2013
Soo Saarka (tan)
Caalamka oo dhan 23,139,004
Astaan = Ilaha akhbaartan: Hay'ada Cuntada Aduunka (FAO)
↑ . Fao.org http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor. Soo qaatay 2 February 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Digir&oldid=214593"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 23:36
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 23:36.